Usama Cismaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
cagaarshowga ama jooniska waa cudur dhibaato weyn ku haya bulshada caalamka, sidaas darteed sanad kasta 28-ka July waxaa loo asteeyay maalinta cagaarshowga adduunka, si bulshada caalamka looga wacyigaliyo halistiisa. Cudurka waxaa keena feyrusyo kala duwan, kuwaas oo keena burbur iyo dhaawac ku dhaca unugyada beerka (Hepatitis), feyrusyadaas waxaa ka mid ah: Virus A, B, C oo ah kuwa ugu badan iyo D, E. Cagaarshowga A ( Hepatitis A Virus – HAV) Waa nooca ugu badan sanadkii wuxuu ku dhacaa tiro dhan 1.4 milyan, wuxuu ku badan yahay carruurta dadka waaweyn wuu ku dhacaa, hab saf mar ah (Outbreak) ayuu leeyahay. …
Hadii uu ogaan lahaa ninku shaqada aqalka Faa’iidada ay leedahay waxa uu kula tartami lahaa xaaskiisa sida ay sheegtay Alexandra Burchard Barker oo ah khabiirad Jarmal ah. Khabiiradani waxa ay sheegtay in shaqada gurigu ay tahay hub wax ka taraya sidii loo gubi lahaa xayrta qofka , iyada sido kale door muhim ah ay ka ciyaarto sidii loo sugi lahaa caafimaadka iyo dhaq dhaqaaqa jimicsiga. Khabiiradu waxa ay tiri qofka miisaankiisu yahay 70 kilo waxa uu gubi karaa 600 calories (oo ah qiyaasta tamarta cuntadu dhaliso) kadib marka uu qabto 2 saacadood oo shaqada guriga ah, taasoo u dhiganta jimicsiga u baahan …
Fibromyalgia waa lafo iyo murqo xanuunka ugu caansan markii laga reebo riixa “Osteoarthritis”. Badanaa xanuunkaan waxaa lagu qaldaan xanuunnada kale sida riixa, roomaatiisamka iyo lafa xanuunnada kale. Fibromyalgia waa xanuun raaga oo keena xanuun, tigtignaan, danqasho murqaha, seedaha iyo kala-goysyada. Fibromyalgia waxay ka koobantahay laba eray oo kala ah: Fiber: Miiqo ama Liif Myalgia: Murqo xanuun. Waxaa kaloo cudurkaan la socon karo calaamado kale sida daganaansho la’aan, daal, tabardarri, welwel, diiqo, iyo socodka caloosha oo isbadasha (saxaro adeeg ama shuban). Waxa keeno cudurkaan illaa iyo hadda lama garanayo laakiin waxaa la aaminsan yahay in dareemidda xanuunka uu ka sarreeyo …
Faa’iidooyinka Cunista Qudaarta Goorkasta |TukeSomalism.Com
Usama Cismaan, September 9, 2016
Cunista miraha aad ayay caafimaadka ugu fiicantahay. Waxa ay leedahay waxtar xaga kobcinta jirka iyo difaaca jirka. Waa muhiim in aad cuntid marwalba miro kala duwan. Waa iskumid hadii aad cuntid miro cusub ama fresh ah, kuwa laqalajiyey ama kuwa laqaboojiyey. Hadii aadan heli Karin miro fresh ah waxaad marwalba iskudaydaa inaad cabtid cibtaanka miraha lashiiday ama aad cuntid Miraha Waxaaa marwalba fiican in aad il gaar ah aad u yeelatid sida aad u cuni lahayd cunto dheylatiran oo kamid ah Miraha. Hadaba hadii aad tahay qofka marwalba jecel inuu cuno hilibka waxaa iga waano ah in aad yareysid cunista …
Neef ama Asma waa cudur ay marinnada hawadu ee gala sanbabadaadu ay cadhiidhi noqdaan ayna soo saaraan xab. Marka ay tani dhacdo, way adag tahay in aad neefsato. Waxyaabaha kicin kara neeftu in ay ku qabato waxaa ka mid ah xajiinta, hergebka, daawooyin, habaaska ama boodhka, catarka iyo baruufannada, qiiqa, kiimikooyin, jir dhis ama niyad kac. Calaamadaha: Neefsasho siyaado ah ama dhibaato neefsashada ka timaadda Xiiq ama neefsasho cod leh Quficid laga yaabo in ay ka sii darto habeenkii ama aroorta hore Feedhaha oo giigsanaan laga dareemo Wadna garaac Cune cun-cun Daal in aad dareento Madax xanuun Waxaa laga yaabaa …
Jadeecada waxaa keena fayrus jeermis aad u xun wata. Ugu badanaan qof walba oo uu ku dhaco cudurkani wuxuu yeelan doonaa xummad aad u xun, firiiric oo bukaan ayuu ahaan doonaa. Carruurtu caadi ahaan waxay sariirta jiifaan ilaa iyo shan maalmood waxayna dugsiga ka fadhiyi karaan ilaa iyo toban maalmood. Dadka weyni waxaa suurogal ah inay waqti intaas dhaafsan sii bukaan. Lama ogaan karo qofka sida xun uu cudurka jadeecadu ugu dhici doono. Dhibaatooyinka jadeecadu waxay gaartaa 15kii carruur ahba hal. Dhibaatooyinka yimaada waxaa ka mid ah jeermis dhagta, laabta iyo marinnada hawada laga neefso ee sare ku dhaca, shuban, …
Daraasad ay sameysay jamacdda duke (DUKE UNIVERSITY) mardhow waxay ku ogaatay in dumarku ubaahanyihiin waqti kabadan ragga intay hurdaan taasoo ay ku sharaxeen sababteeda awooda caqliga iyo murqaha jirka isticmaalkooda inta uu le’egyahay . Waxay ku fasireen in dumarku isticmaalaan awood caqliyadeed xad-dhaaf ah markay arrin caadifad leh ay la soo darasto,waana taas midda ay kaga duwanyihiin ragga Culmadii daraasadda sameeyay waxay ku baareen xaaladaan sedex arrimood oo kala ah Inta goor ee ragga iyo dumarka ay hurdada kasoo kacaan saqdi dhexe habeenki Inta jeer ee ragga ama dumarku ay baahida hurdada ah ay qabato maalinki Soo kicitsa ragga iyo …
Xulbadu waa dhir-daweed waxtar badan Waxayna wax ka badali kartaa caafimaadkaaga iyo noloshaada. Xulbada waxaa laga sameeyaa dawooyin badan. Xulbada afka ayaa laga qaadan karaa korkana waa la marsan karaa. 1-kii qaado ama malqacad oo xulbad ah waxaa ku jira nafaqooyinkan: 35.5 oo kaloori ah 6.4 garaam oo kaarbohaydareed ah 2.5 garaam oo borotiin ah 0.7 garaam oo dufan ah 2.7 garaam oo fiber ah 3.7 miliigaraam oo bir ah 21 miligaraam oo macdanta magnesium ah 32.6 miligaraam oo foosforas ah 0.1 miligraam faytamiin B6 ah Faa’iidooyinka xulbada : -Xulbadu waxay caawiisaa dhibaatooyinka dheefshiidka sida calool fadhiga iyo calool xanuunka. …
Meningitis-ku ama Qoor-gooyaha sida soomaalida u taqaanno, waa cudur halis ah oo si dhakhso u dila caruurta iyo dadka waaweynba, wuxuu nafeeyaa, maskaxda, indho-beel ayuu keenaa ama dhagoolnimo, haddii aanan 24-ta saac ee ugu horreyso wax laga qaban. Waa xanuun waaliddin badan ay ku waayeen caruurtooda maadaama si kadis ah uu ku billawdo, una eg xanuunnada leh qandhada iyo madax xanuunka laakiin ka helis badan, wax ka qabadkiisane waqti xadidan leh. Meningitis waa infekshan ku dhaca xuubyada ku daboolan maskaxda iyo xangullaha lafdhabarta “Spinal Cord” dhex mar. Markuu infakshanka ku dhaco, xuubyada ama dahaarka maskaxda way bararaan, kadibne qofka wuxuu …
Faruuryaha oo dildillaaca oo qolfoof yeeshaan “Cheilitis” waa xaalad ka dhalato markii faruuryuhu qallaalaan kadibna dillaacaan maxaa yeelay badanaa faruuryaha waxaa dulsaaran xuub yar oo dufan leh oo eebbe ugu talagalay in uu subkiyo faruuryaha, haddii xuubkaas la waayo ama laga qaado faruuryaha ayaa dhibkaan la arkaa. Calaamadaha Calaamdaha faruuryaha dildillaaca waxaa ka mid ah: – Faruuryo qalleel, – Barar, – Jeexjeex yar, – Dubka oo ka fiiqmo. Haddii dildillaaca uu weynyahay faruuryaha way dhiigaan xanuunne way keenaan. Sababaha Faruuryaha oo jeexjeema wax badan ayaa keeni karo laakiin waxaa ugu caansan faruuryaha jeexjeexmo xilliga qaboobaha. Waxyaabaha kale ee caanka ah …